Plastic sisetshenziselwa izinto ezahlukene It is kabanzi enkulu ekwakhekeni emincane nemikhulu ehlukahlukene izingxenye kokubili zezimboni futhi zasendlini. Glassware asetshenziswe Interiors kwezakhiwo zokuhlala kanye namahhovisi.
Ngohlobo Lomuntu Okufanele Ube indaba esibizwa plastic ketshezi, ikuvumela ukudala ezihlukahlukene ngezindlela ezihlukahlukene futhi ayilingani lemisebenzi yezandla. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuze sifeze izinqumo original design. Indlela yokwenza plastic ketshezi ekhaya?
Ukwenza plastic ketshezi ngezandla zakho siqu, kudingeka alungiselele okulandelayo:
isiqukathi ezenziwe ngengilazi noma insimbi;
Ngobungako acetone esetshenziswa kuncike umthamo wayefisa ithuluzi esiphelele.
Uma ufuna ukwenza i-plastic ketshezi ngezandla zakhe, iresiphi sakhe sisuke sisekelwe Ukuqedwa Foam e acetone. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa polystyrene Foam. Kuyinto esitsheni lokugoqa ezihlukahlukene zikagesi zasendlini nemishini kagesi.
Indlela yokwenza plastic ketshezi ngezandla
Step by step recipe for ekwenzeni impahla wathi simiswe ngalendlela lelandzelako:
Vula isitsha acetone futhi uthele uketshezi gilazi tsha ukuze level yayo kusuka phansi ilingana cishe 1 cm.
Polystyrene Foam kuyadingeka ukuba singangeni izingcezu eziningi ezincane, ngasinye okuzokwenza kalula etholakala ngaphansi ungqimba kuphela.
plastic Liquid ngezandla zakho siqu kungenziwa ekushoniseni ucezu ngalunye esitsheni futhi elinde ke ukuncibilikisa ngokuphelele.
I Foam kufanele ukungezwa isitsha kuze kube isikhathi lapho kokuba uyeke ancibilike. Khona-ke kudingeka ulinde 5-10 imizuzu acetone ubuningi ayahwamuka.
Ngemva kwalokho, bakha mass viscous is, angasetshenziswa ukuze ukukhiqizwa imikhiqizo ehlukahlukene phansi isitsha.
Ukwazi indlela yokwenza ngepulasitiki ketshezi, khumbula ukuthi ukuqina egcwele uquqaba uyaqhubeka amahora 20-30. Ngenxa yalokho, le nto ekhiqizwa ayikwazi ukususwa kusukela isikhunta phakathi nalesi sikhathi isikhawu.
Agent okumele asetshenziswe usayizi squeegee encane. Movement ngaleyo ndlela kufanele kube bushelelezi. plastic Liquid kuyadingeka yokwelula phezu ngayo. Uma uyisebenzisa ukugcwalisa igebe, kungcono ukusebenzisa umsebenzi shayela nge bristles kanzima. Badinga "push" inhlanganisela ibe izikhala. Ngemva lukhuni plastic Kunconywa ukusebenzisa elinye ungqimba material.
Kuchazwe ngezindlela zakudala ithengiswe off eshalofini. It kuphela idinga ukuxoxa ku okugeza noma imishini ekhethekile amanzi. Ngenxa yalezi ngokuvamile zisebenzisa isakhiwo umshini wokomisa izinwele.
Ngokuvamile, plastic ketshezi akhiqizwa emaphaketheni obukhulu. eshalofini yokuphila futhi isitoreji izimo zawo ziyisikhumbuzo esiqinile. Amazinga egumbini lapho likhona, akufanele iwe ngezansi degrees 15. Uma kungenjalo, kusho ukusebenza ngokuhlala:
ubulukhuni ngemva kokuphulukisa;
liquid plastic izindleko impela high. Ngakho-ke kungcono ukukwenza ngokwakho.
Acetone uketshezi kuyingozi kakhulu, okuyinto Uphatha kabi emzimbeni womuntu. Ngakho-ke, i-plastic ketshezi ukwenza izandla zabo kuvunyelwe kuphela ekuhambisaneni izinyathelo ezilandelayo:
Ngaphambi ukusebenza acetone ufunde ngokucophelela imiyalelo ukusetshenziswa kwaso. It is lokuphekiwe ilebula isitsha.
Kuyadingeka ukusebenzisa amagogolo ekhethekile air-Friend. Bayoba ugcine amehlo akho uma contact ngamaconsi liquid ububi ngentukuthelo. Umsebenzi ngaphandle kwabo kungabangela ukulimala kakhulu iso.
Acetone kuyinto anobuthi, ngakho ukuzisebenzisa kuphela ukuba phakathi endaweni umoya kahle. Kuyadingeka ukusebenzisa imishini yokuphefumula zokuzivikela.
Kuyinto ejenti oluvuthayo. Ngakho-ke, i-plastic ketshezi ngezandla zabo ukwenza kude amalangabi evulekile. Futhi lapho umsebenzi akuvunyelwe nhlobo ukuba ubheme.
Izinsalela acetone elivinjelwe ukuba nkinga ohlelweni amapayipi.
Inqubo kuqedile, futhi ngemva bathele plastic efomini siphelile, kumele ugeze izandla zakho kahle.
Ukusebenzisa plastic uketshezi kule yokuqedela
Ukuze kokuqeda ejenti esetshenziswa isikhathi eside. Ngemuva kwesicelo yayo, ifilimu nokunwebeka kwenzeka phezu ngayo. It has a high ukumelana namanzi kanye ukumelana UV ukuchayeka. Kuvikelekile enjalo material ifilimu akesabi izihlanzi nolaka. surface bushelelezi has a isicwebezelisi nice azigcina izici zayo eminyakeni.
plastic Liquid emsebenzini iwindi
Iningi amafasitela esanda kumiswa plastic ezonini abayoba nayo izikhala. Ukuqeda into enjalo zonke izingxenye isakhiwo iwindi, okuyinto kuhlobene, iphathwa ne-ejenti kuchazwe. Ngemva iphele idala phezu ifilimu nokunwebeka selinqunyiwe. Ukusebenzisa plastic liquid amafasitela ngezandla zabo kungenzeka emva umkhiqizo impahla ngokwendlela indlela echazwe ngenhla.
Kusho e rustproofing
plastic Liquid libhekene ngezinga eliphezulu adhesion kanye iphathwa ebusweni metal. Lokhu impahla ndaba, baqala ukusebenzisa steel ekwelashweni anti-ukugqwala. I plastic liquid isetshenziswa ebusweni ngaphandle priming. Seyomile emahoreni ambalwa. Ngemva kwalokho, bakha ifilimu is phezu esivikela impahla kusukela rusting.
Lapho kukhona ubuhlungu esiswini ezingabantu.
UMengameli waseMelika Pirs Franklin: Biography, imisebenzi kanye nokubuyekeza
Footballer Gorlukovich Sergey: Biography nesithombe
Izinhlobo emaphaketheni. Okufakiwe kwezimpahla, imisebenzi yayo, izinhlobo kanye nezici